ရကွေီးနတေဲ့လမျးကိုဖွတျကူးဖို့အတှကျ ခဈြသူကောငျလေးရဲ့ဖိနပျစိုမှာဆိုးလို့ ကိုယျတိုငျကြောပိုးပွီး လမျးကူးခဲ့တဲ့ မိနျးကလေး – KK Daily News
တရုတျပွညျ ဝူဟနျမွို့ရှိ ရလှေမျးနတေဲ့ လမျးမြားပျေါမှာ မိနျးကလေးတဈဦးဟာ သူမရဲ့ကောငျလေးကို ကြောပိုးပွီး လမျးကူးခဲ့တာကွောငျ့ ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါမှာ ပြံ့နှံ့နခေဲ့ပါတယျ ။ ဒီအရာက ကောငျလေးနမေကောငျးဖွဈလို့ မသနျမစှမျးဖွဈလို့ မဟုတျဘဲ ထိုကောငျလေးဟာ သူ့ရဲ့ သားရဖေိနပျကို ရကွေီးစိုမာဆိုးတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ ။
ကောငျလေးက သူ့ဖိနပျကိုခြှတျပွီး ရညျးစားနဲ့အတူ ရကွေီးရလြှေံကို ကြျောဖွတျယျ့ အစား သူ့ကိုသယျနိုငျလားလို့ ကောငျမလေးကို မေးလိုကျပါတယျ ။ ကောငျမလေးက သူမရဲ့ကောငျလေးကိုအရမျးခဈြပွီး သူ့ဖိနပျကိုမပကျြစီးစခေငျြတာကွောငျ့ “ဖိနပျ ပကျြစီးလိုကျရငျ သူ့ကိုပွနျပွငျဖို့ အခြိနျအမြားကွီးပေးရလိမျ့မယျ” လို့ ပွောပွီး ကောငျလေးကို ကြောပိုးခဲ့လိုကျတာပါ ။
Netizen တှကေ ကောငျမလေးကို ခြီးကြူးတဲ့သူအမြားကွီးရှိပမေဲ့ ကောငျလေးရဲ့လုပျရပျတှကေို အမြားစုက သဘောမကခြဲ့ပါဘူး ။ မှတျခကျြပေးသူတဈဦးက“ အဲဒါကသူတို့နှဈယောကျရဲ့ဆကျဆံရေးဘဲလေ ၊ ငါပွောပိုငျခှငျ့မရှိပါဘူး၊ ဒါပမေယျ့ ဒါကနညျးနညျးလေးတော့ မတရားဘူး။
သူငယျခငျြး မငျးရဲ့သားရဖေိနပျတှကေို မပကျြစီးခငျြရငျ အဲဒါတှကေို ခြှတျလိုကျ။ ပွီးတော့ ဒီကောငျမလေးကို ဘယျလိုပွောရမလဲတောငျမသိတော့ပါဘူး၊ နုံခြာတာလား ?မိုကျမဲတာလား? ” ဆိုပွီး Comment ပေးခဲ့ပါတယျ ။
ရေကြီးနေတဲ့လမ်းကိုဖြတ်ကူးဖို့အတွက် ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ဖိနပ်စိုမှာဆိုးလို့ ကိုယ်တိုင်ကျောပိုးပြီး လမ်းကူးခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး
တရုတ်ပြည် ဝူဟန်မြို့ရှိ ရေလွှမ်းနေတဲ့ လမ်းများပေါ်မှာ မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ကောင်လေးကို ကျောပိုးပြီး လမ်းကူးခဲ့တာကြောင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအရာက ကောင်လေးနေမကောင်းဖြစ်လို့ မသန်မစွမ်းဖြစ်လို့ မဟုတ်ဘဲ ထိုကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့ သားရေဖိနပ်ကို ရေကြီးစိုမာဆိုးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။
ကောင်လေးက သူ့ဖိနပ်ကိုချွတ်ပြီး ရည်းစားနဲ့အတူ ရေကြီးရေလျှံကို ကျော်ဖြတ်ယ့် အစား သူ့ကိုသယ်နိုင်လားလို့ ကောင်မလေးကို မေးလိုက်ပါတယ် ။ ကောင်မလေးက သူမရဲ့ကောင်လေးကိုအရမ်းချစ်ပြီး သူ့ဖိနပ်ကိုမပျက်စီးစေချင်တာကြောင့် “ဖိနပ် ပျက်စီးလိုက်ရင် သူ့ကိုပြန်ပြင်ဖို့ အချိန်အများကြီးပေးရလိမ့်မယ်” လို့ ပြောပြီး ကောင်လေးကို ကျောပိုးခဲ့လိုက်တာပါ ။
Netizen တွေက ကောင်မလေးကို ချီးကျူးတဲ့သူအများကြီးရှိပေမဲ့ ကောင်လေးရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို အများစုက သဘောမကျခဲ့ပါဘူး ။ မှတ်ချက်ပေးသူတစ်ဦးက“ အဲဒါကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဘဲလေ ၊ ငါပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒါကနည်းနည်းလေးတော့ မတရားဘူး။
သူငယ်ချင်း မင်းရဲ့သားရေဖိနပ်တွေကို မပျက်စီးချင်ရင် အဲဒါတွေကို ချွတ်လိုက်။ ပြီးတော့ ဒီကောင်မလေးကို ဘယ်လိုပြောရမလဲတောင်မသိတော့ပါဘူး၊ နုံချာတာလား ?မိုက်မဲတာလား? ” ဆိုပြီး Comment ပေးခဲ့ပါတယ် ။